Diaspora malagasy : Nahatanteraka ny adidiny -
AccueilSongandinaDiaspora malagasy : Nahatanteraka ny adidiny
12/11/2018 admintriatra Songandina 0
Namoaka ny voka-pifidianana tamin’ny andrana amin’ny latsa-bato amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany, ireo teratany malagasy mipetraka any ivelany, na Diaspora malagasy.
Tamin’izany indrindra no nahafahan’izy ireo nandray anjara, ka nahatratra 5 554 ireo mpifidy raha 14 904 kosa no voasoratra anarana. Izany hoe, mahatratra 37,27% kosa ny taham-pandraisana anjara tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena, fihodinana voalohany iny.
Araka izany, lany teo amin’ny fihodinana voalohany ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, izay nahazo vato 58,28%, arahin’ny kandidà laharana faha-4, Dama Zafimahaleo, eo amin’ny laharana faharoa, nahazo vato 15,12%. Fahatelo kosa ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina, nahazo vato 9,11%.
Hita sy tsapa, araka izany, fa maro ireo Malagasy mipetraka any ivelany no resy lahatra amin’ny programan’asan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Raha io voka-pifidianana io mantsy, avy hatrany dia ity farany no lany Filoham-pirenena teo amin’ny fihodinana voalohany.
Ankoatra izay, mangataka ny handray anjara amin’ny fifidianana manaraka kosa ny Diaspora malagasy. Tsy vitan’izay fa mangataka ihany koa izy ireo ny mba hanovana ny lalàna mitondra sy mifehy ny fifidianana. Marihina fa maro dia maro ireo Malagasy mipetraka any ivelany mitaky ny zony ho amin’ny adidy amin’ny firenena.
Fantatra nanditra ny valan-dresaka nataon’i Lalatiana Ravololomanana fa fitoriana faharoa napetrany ho an’i Lalao sy Marc Ravalomanana no nateriny androany tetsy amin’ny biraon’ny Bianco omaly. Ny volana Jolay 2017 ny fitoriana voalohany kanefa tsy nisy ...Tohiny